कतै गुणस्तरहीन कण्डम प्रयोग गर्दै हुनु हुन्छ कि ? कण्डमबारे जान्नैपर्ने कुराहरु - Samachar PatiSamachar Pati
यौनसम्पर्कको बेला कण्डम प्रयोग गर्नाले गर्भाधारण हुनबाट मात्र रोकिँदैन, कैयौँ प्रकारका यौनजन्य रोगहरूबाट बँच्न सकिन्छ । कण्डम सुरक्षित यौनसम्पर्कको लागी अती जरूरी छ । तर एउटा कुरा ध्यान दिनुहोस्, कण्डम सुरक्षित यौनसम्पर्कको लागी जती अत्यावश्यक छ, त्यसको एक्पायरी समय पनि त्यति नै महत्वपूर्ण छ ।
एक्सपायर कण्डम प्रयाेग गर्यो भने
स्याङ्जाको वालिङबाट कडा खालको सिजनल रुघाखोकी फैलिएको आशंका
सर्पले टोक्यो भने हामीले आतिएर धेरै गल्ति गर्ने गर्छौ जान्नुहोस् ! सर्पले टोक्दा के गर्ने के नगर्ने